Ukutya - Wikipedia
Ukutya yiyo nantonina  esisondlo nenkxaso yomzimba. Idla ngokuba yinto esuka kwisityalo okanye isilwanyana ngokwemveli, kwaye iba yinto equlethe izakha mzimba ezinje ngamafutha, iiproteini, iitamini, okanye iityuwal zomzimba. Zonke ke ezi zinto zikukutya okuthi kungeniswe emzimbeni zizidalwa eziphilayo zize ke iimbewu zegazi (iicell) zomzimba zizithaphulele ke kuzo ezi zinto zikukutya ngeenjongo zokuba zibenamandla, zibenobomi, okanye zikhule kakuhle.
Ukutya okuvela kwizityalo
HNgokwembali, abantu bazigcinela ukutya ngeendlela ezimbini: ngokuzingela nangokudibana, nangokulima. Namhlanje, inkoliso yokutya kwamandla okufunwa ngamandla kukwanda koluntu lwehlabathi kuziswa ngamashishini okutya.
Ukhuseleko lokutya kunye nokugcinwa kokutya kukhuselekile kusesweni lwamagosa anjenge International Association for Food Protection, World Resources Institute, World Food Programme, Food and Agriculture Organization, okanye International Food Information Council.
Last edited on 4 EyoMqungu 2021, at 05:48
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-4 EyoMqungu 2021, kwi-05:48